पेट बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? पानीपुरी र चटपटे खानुहोस ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यपेट बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? पानीपुरी र चटपटे खानुहोस !
पानीपुरी र चटपटेको स्वाद आखिर कसलाई राम्रो मिठो लाग्दैन होला र ? पानीपुरी देशको सबै मानिसहरूलाई मनपर्ने सडक खाजा मध्यको एक हो ।अहिलेको अवस्थामा मानिसहरू धेरै डा’इटिङमा ध्यान दिइरहेका छन् । तपाईंलाई अचम्म लाग्न सक्छ तर पानीपुरीले तपाईको तौल घटाउन पुरै मद्दत गर्नेछ ।
वास्तवमा, पानीपुरीले मानिसको शरिरमा भएको अधिक बोसोको मात्रा घटाउन मद्दत गर्दछ। पानीपुरीमा ३६ क्या’लोरी हुन्छ । एक प्लेट गोलगप्पाले तपाईंलाई एकपटकमा २ सय १६ क्या’लोरी मिल्दछ ।पानीपुरी धेरै मोटो भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वस्थकर खाजाको विकल्पमा हुन सक्दछ।
यदि तपाईं डा’ईटमा हुनुहुन्छ र छिटो तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने, पानीपुरीले तपाईंलाई तौल घटाउन मद्दत गर्दछ। पानीपुरीको पानी एकदमै तिखो हुने हुनाले यो खाए पछि केहि समय भो’क लाग्दैन। यो एक स्वादिष्ट खाजाको रुपमा स्थापित हुनसक्छ र यसले तपाईंको वजन घ’टाउन मद्दत गर्दछ । पानीपुरी खाएर नियमित व्यायाम गर्नुभयो भने तपाईको तौल घ’ट्ने कुरामा दुईमत छैन ।
तौल घटाउनको लागि घरमा बनाएको पानीपुरी खानुहोस-धेरै डा’एटिसियनहरू भन्छन्, पानीपूरीले तौल घटाउन मद्दत गर्दछ। तर, तपाईं यसलाई घरमा बनाएर नै खान सक्नु हुन्छ। घरमा तपाईं गहुँका पुरीहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई कम तेलमा पकाउन सक्नुहुन्छ।
अर्कोतर्फ, तपाईं ताजा पानीको सट्टा जीरा वा पानी जीरा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राम वा मूंग दाल जस्ता स्वस्थ चीजहरू हा’ल्नाले यसलाई अझ स्वस्थ बनाउँदछ। जाडोमा यी साना नि’यमहरू लिनुहोस्, तपाईंको शरीरको आकारमा त’त्काल परिवर्तन ल्याउन यसले मद्दत गर्दछ।
पानीपुरीको पानी निकै फा’इदाजनक हुन्छ– पानीपुरीका लागि घरमै तयार पारिएको पानी धेरै फाइदा जनक हुन्छ। यदि तपाई घरमा पानीपुरीको पानीमा पु’दिना, जीरा र हींग प्रयोग गरी बनाउनुहुन्छ भने, यसले पाचन प्रणालीमा मद्दत गर्दछ ।
धनिया वा यसको पातहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जीराले प’चाउन सहयोग गर्दछ। पानीपुरीको पानीमा पाचन गुणहरू धेरै छन्। जीरा पाचनमा उपयोगी छ र यसले मुखको ग’न्धबाट पनि ब’चाउँछ ।